Isiokwu a mfe ma dị mfe ụzọ ibudata free music online.
Part1: Download free music online site gụgharia ọrụ
Part2: Record (download) free music online si YouTube site TunesGo
Part3: Ndị ọzọ na saịtị TunesGo ike ibudata free music
Ò nwetụla mgbe ị nụrụ a music na ị chọrọ ibudata ma ọ bụ chekwaa ya ka ọ ka ige ntị na ya na-anọghị n'ịntanetị na-enwe na Spotify? Ọfọn, m ga-enwe obi ụtọ na-agwa gị na Wondershare TunesGo mere ka nbudata site Spotify na ndị ọzọ na music gụgharia weebụsaịtị n'ezie ngwa na mfe. Ọ nwere wuru na atụmatụ na-enye gị ohere chekwaa ma ọ bụ ọ bụla download music site na ndị ọzọ music gụgharia weebụsaịtị nri na gị onwe gị na PC na dị nnọọ a di na nwunye nke clicks. Soro nzọụkwụ n'okpuru ozugbo download si Spotify.
Nzọụkwụ 1: Na gị Spotify ngwa, họrọ music ịchọrọ ibudata na pịa na play button.
Nzọụkwụ 2: ngwa ngwa na-emeghe Wondershare TunesGo na pịa teepu taabụ na aka-ekpe-n'akụkụ nke window wee pịa na rec na etiti nke Wondershare TunesGo window ịmalite ndekọ.
Nzọụkwụ 3: Ọ bụrụ na ị gụsịa Ndekọ music, pịa na nkwụsị button dị ka e gosiri na foto n'okpuru.
Nzọụkwụ 4: Iji ego na ndepụta nke gị dere music, pịa dere taabụ na aka-ekpe-n'akụkụ nke Wondershare TunesGo window.
Nzọụkwụ 5: Zọpụta music gị na kọmputa site na-ahọpụta music ị chọrọ ịzọpụta na ịpị Export bọtịnụ. Ugbu a, họrọ ọnọdụ ị chọrọ ịzọpụta na ọ na na ọ bụ ya.
Ị nwere ike ịgbanwe track aha na mbụ music aha site na ịga na ọnọdụ egwu na-azọpụta ma ọ bụ exported na renaming na music faịlụ.
Wondershare TunesGo-enye gị ohere nyefee gị music si gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod azụ gị iTunes. Ọ dịghị mkpa ọ bụrụ na ị furu efu gị na kọmputa data ma ọ bụ ma eleghị anya, na e nye gị a na ngwaọrụ na etinyegoro music, TunesGo ga-akpali gị music si gị iOS ngwaọrụ azụ n'ime gị iTunes n'ọbá akwụkwọ na kọmputa gị. Na ihe kasị mma banyere Wondershare TunesGo bụ na ọ na-akpatre eweta iTunes na Android ọnụ. Lelee mfe ndu n'ihi na iwughachi gị iTunes n'ọbá akwụkwọ iji Wondershare TunesGo.
TunesGo ngwa enye gị ohere download music si music gụgharia saịtị na ọtụtụ ndị ọzọ na weebụsaịtị gụnyere YouTube. Na nke a ngwa, ị nwere ike ibudata dị ka ọtụtụ music dị ka ị chọrọ.
1.Start na TunesGo ngwa na pịa "Online music" taabụ na n'aka ekpe.
2.Select YouTube website site na ịpị YouTube saịtị na ala nke window.
3.Surf site na YouTube website na-emeghe music ma ọ bụ video ịchọrọ ibudata.
4.Click na Download button n'akuku njikọ mmanya n'ụlọ n'elu nke window.
TunesGo ngwa ga-amalite nbudata na video na mgbe ahụ tọghata ya MP3 usoro.
YouTube video nwekwara ike ibudata site na dị nnọọ edegharị na pasting video njikọ ke YouTube njikọ mmanya.
1.Run TunesGo ngwa na pịa "Online music" taabụ site n'aka ekpe.
2.When ị idetuo na njikọ nke video ị chọrọ, TunesGo na-akpaghị aka mbipụta ya ndị njikọ mmanya ma ọ bụrụ na ọ na-adịghị Tapawa njikọ ke njikọ mmanya, mado ya aka wee pịa na download button n'akuku njikọ mmanya. Ego foto n'okpuru.
Ị nwere ike na-ele gị ebudatara music site na ịpị ebudatara taabụ na TunesGo menu.
TunesGo akwado YouTube na nza nke ọzọ weebụsaịtị. Ndepụta dị n'okpuru comprises nke n'elu saịtị na-music na TunesGo ike ibudata music si.
1.Spotify: Spotify bụ a dijitalụ music gụgharia ọrụ nke na-enye gị nweta ọtụtụ nde songs.
2.Pandora: Chọpụta ọhụrụ music na revel ochie ọkacha mmasị. Malite na gị họọrọ ọgụ egwu na songs.
3.Sound Cloud: An audio n'elu ikpo okwu na-enyere ụda creators iji kwalite, ndekọ, bulite na ịkọrọ ha ibido-kere ụda.
4.Hulk Share: Hulk Share free internet redio na-enye free music jikọọ na nka na enyi na ịchọpụta ọhụrụ artists.
5.Tune Na: Gee online redio, chọta nkwanye music redio na gụgharia okwu redio na akụ na.
6.iHeart: iHeartRadio eweta music ndụ. Na-ege ntị ọtụtụ puku ụgbọ na-free ma ọ bụ mepụta omenala ụgbọ na-ahaziri si imerime songs!
7.Last FM: The kasị ibu n'ụwa na-akara music katalọgụ, kwadoro site na gị scribbles. Free n'ige ntị, stats, foto, videos, grafụ, biographies na concerts.
8.Jamedo: The nọmba 1 ikpo okwu maka music na bụ free.
9.Jango: Free internet redio na nanị ole na ole mgbasa ozi na ndị ọzọ dịgasị iche iche. Na-ege ntị ọtụtụ narị music genre ụgbọ ma ọ bụ ike gị onwe gị na ọkacha mmasị gị music.
10.Groove Shark: Na uzo Shark i nwere ike na-ege ntị, ịchọọ maka na-eme ka listi ọkpụkpọ nke ọkacha mmasị gị music.
1. Ọ na-akwado download si Sound ígwé ojii, Spotify, YouTube, Vimeo na a otutu ihe.
2. TunesGo omume atọghata music ebudatara ozugbo. Ngwa ngwa, mgbe nbudata music, egwu na-converted site TunesGo omume n'ime a format na nke ahụ bụ ihe kasị mma maka ngwaọrụ gị.
3. Ihe omume na-akwado nyefe nke music na site na otu ngwaọrụ ụfọdụ ndị ọzọ n'agbanyeghị nke nyiwe nke ngwaọrụ.
4. TunesGo ngwa na-ahapụ gị-ahụ n'ezie azụ-elu nke gị music n'ọbá akwụkwọ. Ọrụ nwere ike iṅomi ngwaọrụ ma weghachi ndabere na ngwaọrụ ọzọ.
5. The omume na-enyere ndị ọrụ na-eme ka ojiji nke ngwaọrụ na-Android dabeere na iTunes.